सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रबाट रु ४८ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यहाँका विभिन्न पर्यटकीयस्थल घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । कर्णाली
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ६.७ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बिहीबार तथ्याङ्क विभागले प्रदेशस्तरीय जीडीपीको योगदान सार्वजनिक पत्रकार
काठमाडाैँ । नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले रु ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ
काठमाडाैं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक हजार ४०० ले उकालो लागेर रु ९८ हजार ६०० पुगेको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पूरा हुदैन : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । बुधबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो
विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तिय समधानको विविधिकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहँुच बढाउनका
पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको छ’
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले
नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजश्व चुहावट
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले गलत तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर विजक खरिद गरी राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा दुई व्यावसायिक फर्मविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार
२ वटा वडाको मत गनिसक्दा भरतपुरमा रेनु दाहालको अग्रता
एमाले अध्यक्ष ओलीको जन्म वडा तेह्रथुमको इवामा एमालेको जित शुन्य